Maxay ka wada hadleen M/ Farmaajo iyo Kenyata. – Hornafrik Media Network
Maxay ka wada hadleen M/ Farmaajo iyo Kenyata.
By HornAfrik	 On May 31, 2018
Hornafrik-Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho hal cisho ah ku jooga dalka Kenya ayaa wadahadal kula yeeshay Madaxtooyada Kenya dhiggiisa dalkan Mudane Uhuru Muigai Kenyatta.
Wasiirka cusub ee Gaashaandhiga oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab.
Ciidamada dowlada iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay duleedka D/Afgooye.